DIB UDEYNTA WHITEFLY WAXAY KORDHISAA UKRAINE - MAQAALLO
Dib udeynta Whitefly waxay kordhisaa Ukraine
Dalka Ukraine, degaanka qaybinta khashinka khatarta ah, caddaanka, ayaa si tartiib ah u sii ballaarinaya. Sanadkii la soo dhaafay, cayayaanka ayaa soo uruuriyay 30-50% ka mid ah beerashada kaabash tan iyo dhammaadka May, taas oo ah, horay loo barbar dhigo sanadihii hore.
Cagaarshow sida cayayaan jiilaalka ayaa la duubayaa sannadka afaraad ee isku xiga. Marka laga soo tago Volyn, Transcarpathian, Ivano-Frankivsk, Lviv iyo Rivne, cayayaanku waxa ay ka muuqdaan dhowr degmo oo Vinnytsia ah iyo xuduudaha gobolka Chernivtsi (on kaabajka Peking).
Duulimaad ballaaran ayaa la arkay laga soo bilaabo tobankii sano ee saddexaad ee May ilaa dhammaadka Juun. Dayuuradda daciifka ah ee Whitefly ayaa sii waday ilaa bartamihii Sebtembar. Kaabashka hore iyo kan dhexe, 7-15% way dhaawacmeen, ilaa 45-50% dhirta oo leh 16-68 dadka waaweyn iyo dirxiga madaxa.
Kaabashka dambe ee bilaha Luuliyo-Sebtembar, ayaa caddaanku waxay ahaayeen 10-62% waxyeelo, 70-100% oo madax ah oo ku yaal gobollada Vinnitsa iyo Rivne, oo leh 28-100 qaybood oo dhir ah. Sanadkii 2018, cufnaanta cayayaanka ayaa ka yaraa sanadihii hore, laakiin qaybta qaybinta ayaa kordhay.
Dufcadaha qaangaarka ah ee loogu talagalay xaaladaha cimilada ah ee Polesia iyo Forest-Steppe, oo si fiican u dhinta jiilaalka meelo bannaan, iyo xitaa dildilaaca ciidda. In cimilada diiran inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee dhirta ee 2019, horumarka iyo waxyeellada cagaarka ah ayaa laga yaabaa inay noqoto mid baahsan, iyo sii kala firdhinta dheeraad ah.